Kuratidza zvinyorwa neelebheri Bani rakakwira
Iyo yakakwira Pomo igomo riri mumakomo eGiant Mountain, iri pamuganhu weCzech -Poland paRestern Silesian Ridge pakati peVysoké Kolo neViolík, inenge 7 km NW kubva Špindlerův Mlýn. Parutivi rwePolish rwepamusoro panomira Transmitter yeChando Pit, pamwe inonyanya kufadza (uye zvirokwazvo inonyanya kuzivikanwa) chivakwa pamakwenzi eGiant Mountain.
Nzvimbo yepamusoro yeCzech yePamusoro Mapani (nzvimbo yakakwira munzvimbo yeCzech) iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweiyo transmitter chivakwa pa1490 m asl. Zvinoenderana neprojekti matanho ezviuru zveBohemia, Moravia uye Silesia, iyi ndiyo inonzi sekisheni repamusoro yeVysoké Kola, nekuti mukurumbira wepamusoro weCzech (kukwirira kubva pachigadziko chine Vysoké Kolo) wakaderera pane 1497 m.
Bani rakakwirira rinowanikwa munzira tsvuku-inoshamwaridzana yeCzech -Polish hushamwari kana munzira yero-yakacheneswa kubva kuLabská bouda.